China FOTON U9 / U10 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Umqeqeshi we-Foton U9 / U10 uqinisekile ukwenza uluvo kulo naluphi na uhambo kunye neempawu zobuchwephesha ezintsha, eqinisekisa inqanaba eliphezulu lokufumaneka kwezithuthi kunye nokusetyenziswa kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kunye namandla.
Inqanaba elipheleleyo 9380 * 2500 * 3400
Isondo lamavili 4710
Ukunciphisa Ubunzima 9.8T
Indawo yokuhlala I-39 + 1 + 1/41 + 1 + 1
Imigangatho yokukhutshwa I-EURO III-i-EURO VI
Igumbi laseLuagge 4.5m3
Inkangeleko yokuzithemba. Inkangeleko ibonisa i-avant-garde yaseYurophu iyila ngokuhambelana ngokugqibeleleyo ne-aesthetics yaseMpuma. Inamandla kwaye inemfashini, ulungelelwaniso lwayo oluqinileyo lokulinganisa kunye nomlinganiso olungeleleneyo ubona umqeqeshi ezisa ukubamba ukuzithemba endleleni.
Isakhelo se-Element Electroplating emile okwephiko
Umdibaniso weLamp yeLamp ye-LED
ukukhawulezisa ukusuka kwi-zero ukuya kwi-90 mph kwimizuzwana engama-28.
Inkqubo yokupholisa okrelekrele
Ixhotyiswe ngobuchule obungundoqo obunelungelo elilodwa lomenzi- inkqubo yokupholisa ulawulo lokushisa kunye nabalandeli abasixhenxe be-elektroniki.
Ubuninzi bokubambeka kufikelela kwinqanaba lama-30.
Umsebenzi okhethekileyo kwindlela emxinwa
Ubuncinci berediyasi efikelela kwi-9.8m.
iTink, umboneleli ophambili we-IOV, wenza inkqubo yolawulo ekrelekrele yokudibanisa ukusebenza, ukuphathwa, kunye nenkonzo ukwenza ulawulo lwezithuthi lube lula.I-GPS yokujonga ixesha lokwenyani inokufumana ulwazi lwesithuthi kuqhubekeko lokuhlalutya imeko, njengokuma kwezithuthi, imeko yokusetyenziswa kwepetroli, isantya, ukukhawulezisa, umkhombandlela, umkhondo wokubaleka